5 Faa'iidooyinka oo cajiib ah oo laga helo khayaarka – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka 5 Faa’iidooyinka oo cajiib ah oo laga helo khayaarka
5 Faa’iidooyinka oo cajiib ah oo laga helo khayaarka
Waa maxay khayaar ama Cucuber?
waa miro cagaaran waa miro ka soo baxda qoyska Cucurbitaceae. marka loo eego Si cilmiyaysan oo loo yaqaan ‘Cucumis sativus’, waxay iska leedahay qoys isku mid ah sida zucchini, qaraha, bocorka, iyo noocyada kale ee baxa wakhtiga xagaaga waana khudaar u eeg muuska oo la yidhaahdo baamiye dhar.
Faa’iidooyinka Caafimaadka ee khayaarka
1.Wuxuu kobciyaaaa ama Daryeelka Maqaarka
Cucumber wuxuu hodan ku yahay silica, taas oo qayb muhiim ah ka ah kobcinta sameynta unugyada isku xirnaanta ee caafimaadka leh ee muruqyada, ligaments, lugaha, carjawada, iyo lafaha.
2.Wuxuu ka hor tagaa Calool istaagga & dhagaxaanta kilyaha
khayaarku waa isku-darka ugufiican labada fiber iyo biyo ah. Sidaa darteed, wuxuu kaa caawinayaan inay jirkaaga ka ilaaliyaan calool fadhiga iyo dhagaxyada kelyaha
3.Waxay xakameysaa cadaadiska dhiigga
Daraasadaha lagu sameeyay DASH (Cunno-qabteynta loo Gaadhsiiyo Dhiig Karka) cuntada waxaa lagu soo saaray iyadoo lagu saleynayo cilmi-baaris laga sameeyay Machadka Caafimaadka Qaranka Mareykanka sida hab lagu caawiyo yareynta dhiig karka iyadoo la joogteynaayo cunida khayaarka ama qayaar.
Daraasad lagu daabacay joornaalka bioimpacts ee 2016 wuxuu iftiiminayaa saameynta anti-hyperglycemic-ka ee qajaarka ama khayaarka.
khayaarka ayaa loo isticmaalay in lagu caawiyo xakameynta gulukooska ee dadka qaba sonkorowga.
5.Waxay bixisaa Awoodda Antioxidant
khayaarka cagaaran ayaa badanaa u dhaqmi kara antioxidant-ka markii la isticmaalo iyadoo ay weheliso cuntooyin la warshadeeyay iyo cuntooyinka sokorta badan leh.